April 2021 - WARAR HUBAN
Ku Dhawaad 15 Ruux Oo Ku Dhintay Dagaal Ka Dhacay Xuduudka Goballada Tigray Iyo Amxaarada
April 30, 2021 F.G 0
Saraakiisha dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dagaal uu ka dhacay xuduudka u dhaxeysa Goballada waqooyiga Itoobiya ee Tigray iyo kan Amxaarada. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dagaalladaas ay ku dhinteen ku dhawaad 15 qof, wuxuuna ka dhacay aagga loo yaqaanno Wag-Hemra oo labada maamul ee Tigray iyo Amxaara ay kala sheegtaan. Dagaalkaan ayaa imaanaya iyadoo ugu badnaan lix bilood hadda laga jooga dagaalkii gobalka Tigray. In kastoo bil gudaheed xukunka looga tuuray maamulkii ay hoggaamineysay TPLF ee Tigray, haddana wariyeyaasha ayaa sheegaya in dagaalka uu caddeyn muuqata u yahay in jabhaddan aysan wali quusan.
Ciidamada diidan muddo kororsiga”Marna Kama Baxeeyno Muqdisho Farmaajo Oo Ku laabta Teendhada”
Ciidanka Xoogga Dalka ee ka soo horjeeda muddo kororsiga Hay’adaha Dowladda Federaalka ayaa iska diiday inay ka baxaan Magaalada Muqdisho, sababo ku aaddan illaa iyo inta laga xaqiijinayo furitaanka shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka. Ciidankan iyo Ciidamada Dowladda ayaa habeenkii Axadda ku dagaalamay Magaalada Muqdisho, ka dib markii Ciidamada Haramcad iyo Booliska Gobolka Banaadir ay weerareen Siyaasiyiinta ka Aragti Duwan Dowlada Waqtigeeda dhaamaday Hoyga Ex madaxweyne Xasan Shiiqa Iyo Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Ciidankan ayaa gurmad ahaan ku yimid aagga Madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan ee Degmada Hodan oo dagaalku uu ka socday, waxaana horkacayay Saraakiil ay ka mid yihiin Faarax Xasan Xaashi (Faarax Jareer) iyo Liibaan Madaxweyne, waxayna ka tirsan yihiin Guutada 7aad ee Qaybta 60aad ee Ciidanka Xoogga Dalka. Faarax Xasan Xaashi waa Taliyaha Ururka Gurmad ee Guutada 7aad, kuwaa oo ka hawlgala deegaanka Leego ee Gobolka Shabellaha Hoose. Guutada 7aad ayaa la rumeysan yahay inay fashilisay hawlgalkii Dowladda Federaalka ku dooneysay in lagu soo qabto Siyaasiyiinta Mucaaradka Muqdisho Xoogaga Ururka Gurmad ee Guutada 7aad ayaa haatan fariisimo [Sii aqri]
Dowlada Masar Oo Xakun Dil ah Ku Fulisay Macallin Duqsi Qur”aan Oo 80 Jir ah
Sida ay warbaahinta masar ay sheegeen 17 Maxbuus oo uu ku jiray Macallim Dugsi Qur’aan oo 80 jir ah ayaa waxaa Isniintii la soo dhaafay ee bishan April 26-dii lagu dhex dilay Xabsiga Waadi Al-Natrun ee dalkaasi. Marxuumintaasi ayaa lagu soo oogay inay ku lug lahaayeen Weerar bishii November 19-dii ee sanadkii 2013-kii lagu dilay 13 Askari oo ku sugnaa Saldhig Bolis oo ku yalla Degmadda Kerdasa ee duleedka magaalladda Giza. Macallinka Dugsi Qur’aanka ee lagu fuliyey xukunka dilka waxaa lagu mgacaabi jirey Sheekh C/Xamiid Jibriil kaasi oo aan wax lug ah ku lahayn weerarkaasi. Waxay ciiddanka ka soo qabteen isagoo ku dhex jira Masjidka, wax yar kadib, markii uu dhacay weerarkaasi oo loogu magac daray Weerarkii Kerdasa (معركة كرداسة). Waxa uu beeniyey inuu ku lug lahaa weerarkaasi, mana uusan ahayn qof ku dhex jiray Siyaasadda ama Mucaarad ku ahaa Dowladda. Dhinca kale, 16-ka kale ee iyagana lagu fuliyey xukunka dilka waxaa lagu kala magacaabi jirey: 1- Waliid Saciid Abu Cumayra, 2- Maxamed Rizaak Abul Sowd, 3- Ashraf Sayid Rizak, 4- Axmed Aweys Xuseen, 5- [Sii aqri]
Sacuudiga “Waan Xeri Doonaa Dugsiyada Turkiga Ku Leeyahay Dalkeeda”
April 29, 2021 F.G 0
Ilo Diplomaasi ayaa waxay sheegeen inay Dowladda Sacuudiga go’aansatay in la xiro Dugsiyada Tuurkishka ee ku yaalla gudaha Sacuudiga marka la gaaro dabayaaqada sanadkan 2021-ka. Ilaa 8 Dugsiyada Turkiga (Turkish Schools) oo xiriir la leh Wasaradda Tacliinta Qaranka ayaa waxay ka hawl-galaan Caasimadda Sacuudiga ee Riyadh iyo Goballo kale, kuwaasi oo qorshuhu yahay in albaabada loo laabo dhamaadka sanadkan. Wasaaradda Tacliinta Scuudiga waxay qoraalka Go’aankaasi si toos ah ugu gudbiyeen Dugsiyada ku yaalla Goblladda W/Galbeed Tabuuk, Riyadh, Taa’if iyo Jeddah. Saraakiil Sacuudiyaan ayaa waxay kaloo booqdeen Dugsiyada Turkishka ee ku yaalla Goballadda Dammaam iyo Abha, si ay Maamulayaasha Dugsiyadaasi ugu wargeliyaan Go’aankaasi. Dugsiyada Turkishka ee ka furan Goballadda Maka iyo Madiina ayaa waxaa iyagana saamayn doona Go’aankaasi. Wasaaradda Tacliinta Sacuudiga waxay kaloo sheegtay in Dugsiyada Turkishka la xiri doono marka uu dhamaado sannad-dugsiyadeedka haatan socda. Ilo Diplomaasi ayaa sheegay in 2,256 Arday oo dhigta Dugsiyadaasi oo aan si fiican u aqoonin Luqadda Carabiga ayaa la sheegay inay dhibaato kala kulmi doonaan haddii ay Tacliintooda ku sii wataan Manhajka la xiriira Wasaaradda Tacliinta ee Sacuudiga.
Shariif”Farmajo Kuma adan Iman Talada Ciidan ee Haku Fakirin In aad Ku Joogto Awood Ciidan”
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo shir jaraa’id qabtay ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameyo khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira. Shariif Sheikh Axmed ayaa ka hadlay qalalaasihii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid si weyn looga xumaado,iyadoo bil ramadaan lagu jiro dhiig la daadiyo. Sheekh Shariif ayaa sheegay in dagaal uusan ahayn mid xilligan habboon balse loo baahan yahay in si siyaasi ah lagu xaliyo. “Xalku waa mid ku dhamaan kara in laga heshiiyo doorashooyinka xalku ma aha mid ciidan.”ayuu yiri Sheekh Shariif. Isagoo ka hadlayay mowqifka uu qaatay ra’iisul wasaare Rooble ee arrimaha doorashooyinka yuu ku tilmaamay mid si weyn wax uga tartay in ay qabowdo xiisadii ka dhalatay muddo kordhinta. “Waxaan uga mahadcelinayaa mowqifka Rai’sul wasaaraha kaasoo ahaa mid sababay in arrintu ay istaagto, sidii magaalada loo xasilin lahaa doorashana lagu aadi lahaa.” Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa ku eedeeyay golaha shacabka inuu ka dambeeyay falalkii dadka ay ku dhinteen kuwo badana ay ku barakaceen. “Baarlamaanka muddo kardhinta uu sameeyay ayaa [Sii aqri]
Ciidamada AMISOM oo loogu Amaray in aysan Ka Mid Naqan Siyaasada Soomaaliya
Shir ay yeesheen Guddiga Isuduwaha ee Ciidamada iyo Booliska Wadamada ku tabarrucaya Booliska ee Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) 28-kii Abriil ayaa laga soo saaray war murtiyeed ku aadan xaalada dalka Soomaaliya iyo sida ay AMISOM ka yeeli lahayd xaaladaas. War Murtiyeed ka soo baxay kulankan ayaa loogu baaqay ciidamada nabad ilaalinta AMISOM inaysan ku milmin siyaasadaha is diidan ee dalka Soomaaliya ayna noqdaan kuwo dhexdhexaad ah. Kulankan oo uu shir guddoominayay H.E. Danjire Bankole Adeoye, Wakiilka Midowga Afrika ee Arrimaha Siyaasadda, Nabadda iyo Amniga (C-PAPS), ayaa waxaa ka soo qeyb galay wakiilo ka socda wadamada Burundi, Djibouti, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leone iyo Uganda iyo AMISOM. Sidoo kale War Murtiyeedka ka soo baxay shirkan ayaa lagu cambaareeyay go’aanada Golaha Shacabka iyo Madaxweynaha ee muddo kordhinta. “Kulanku wuxuu sii xaqiijiyey Heshiiskii 17 Sebtember 2020 oo ah dariiqa loo maro wada-xaajoodyada ku saabsan qaababka doorashooyinka ee Soomaaliya, iyadoo la tixgelinayo ka-qayb-galkeeda oo ah hannaan ay Soomaaliya leedahay oo ay maamusho Dowladda Federaalka, Dowladaha Xubnaha ka ah, Xisbiyada mucaaradka iyo bulshada rayidka” ayaa lagu yiri [Sii aqri]
Talyaaniga oo xayiraad kusoo rogtay Duulimaadyada dalka Bangaladesh
April 29, 2021 M.Jo 0
Wasaaradda Caafimaadka Talyaaniga ayaa sheegtay in aysan ogolaan doonin in shaqsi ka yimada dalka Bangaladeesh uuso galo wadankaasi maadama laga digtoonyahay ka hortaga faafista carona. Wasaarada ayaa tilmaamtay in xitaa kiwa Transetka ku noqda wadankaasi ama joogay mudo kabadan 14 maalmood aysan imaan karin Talyaaniga. Arintaan waxa ay ka dambeysay kadib markii ay sii kordheen kiisaska Covid-19 ee laga soo sheegayo India iyo Bangaladesh horey ayayna Dowladda Talyaaniga joojisay duulimaadyada uga imaana Banladesh.
Mareeykanka “Farmaajo iyo Mursal Waa in aad Waxba Kama Jiraan Ka dhigtaan Mudo kordhintii Farmaajo “
Dowladda dalka Mareykanka ayaa ka dalbatay Madaxweynaha waqtiga ka dhamaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Guddoonka Golaha Shacabka inay si degdeg ah u baabi’iyaan hindise sharciyeedka muddo kordhinta ahaa, kaasi oo horay Beesha caalamka ay ka hortimid. War kasoo Baxay Wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa lagu dalbaday labada Mas’uul ay meesha ka saaraan sharicigii Baaarlamaanku labada sano ugu kordhiyeen farmaajo, sidoo kalena uu Madaxweynuhu saxiixay. Sidoo kale Qoraalka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu boggaadiyay Ra’iisul Wasaaraha Xil gaar diinta Rooble Maxamed Xuseen, Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle sidii ay u diideen muddo kordhinta. Waxaana loogu baaqay Madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada inay si deg deg ah u kulmaan si loo dhameystiro qaabka doorashada ee la isku raacsan yahay lana qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha sida ugu dhaqsaha badan iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17 Sebtember. Hadalka Maraykanka ayaa imaanaya iyadoo dhawaaan Maamulada Galmudug iyo Hir-Shabeelle ay kasoo horjeesteen Muddo kororsigii Farmaajo, waxaana go’aankooda Soodhaweeyay Mas’uuliyiinta mucaaradka ah iyo inta badan Saamileydada siyaasadda Soomaaliya.
Madaxweyne Joe Biden Oo khudbad jediyay kana hadlay ….
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa kulan wadajir ah oo ay isugu yimaadeen labada aqal ee baaralamaanka dalkaasi waxa uu kaga warbixiyay wixii u qabsoomay 100-kii maalmood ee ugu horreeyay xukunkiisa. Khudbaddiisii ugu horraysay ee uu labada aqal oo wadajira uu u jeediyay madaxweyne Biden ayaa waxa uu ku soo bandhigay qorshayaal lagu abuurayo shaqooyin, waxbarashada iyo adeegga bulshada. Hasayeeshee qorshayaashaas ayaa waxaa aad uga soo horjeeda Xisbiga Jamhuuriga. Wuxuu khudbaddiisa ku bilaabay inuu muujiyo waxa uu ku tilmaamay guuulaha tallaalka ee Mareykanaka taasoo wadada u xaaraysa in dib loogu laabto noloshii caadiga ahayd bilaha soo socda. Wuxuu ku faanay in boqollaal kun oo shaqo oo cusub la abuuray 100-kiisii maalmood ee ugu horreeyay iyo sidoo kale in dhaqaalaha uu sare u kacay. Wuxuu sheegay in maalgelintii dhowaan la ansixiyay ay gacan ka geysan doonta yareynta saboolnimada carruurta Mareykanka. Biden wuxuu xildhibaannada u sheegay inay tahay inay tallaabo ka qaadaan – ama ugu yaraan ka doodaan – dib-u-habeynta socdaalka sababtoo ah waa hadal haynta shacabka Mareykanka. “Aan joojino dagaalkeena badan ee la xiriira socdaalka,” ayuu yidhi. [Sii aqri]
Senatar Qeybdid”Waan ka digayaa in Golaha Shacabka ay Kalsoonida kala noqdaa Rooble”
April 28, 2021 F.G 0
Senatar Cabdi Qeybdiid ayaa uga digay Guddoonka Golaha Shacabka iyo Xildhibaanada inay qaadaan go’aamo waxyeeleyn kara tallaabadii Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxda dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle. Shir jaraa’id oo uu ku qabtay goor dhow magaalada Muqdisho ayuu Cabdi Qeybdiid ka sheegay in uu jiro shaki ah in baarlamaanka uu qorsheynayo inuu carqaladeeyo horumarka doorashada laga gaaray. “Waxaan uga digayaa Guddoonka Golaha Shacabka iyo Xildhibaannada in aysan ku dhaqaaqin wax carqaladeynaya doorashada, haddii arrintaas imaatana cawaaqibka ay leedahay iyo dhibaatada ka timaada iyagaa qaadaya,”ayuu yiri Senatar Qeydiid. Sidoo kale Senatar Cabdi Qeybdiid oo maalmihii la soo dhaafay dadaal xoog leh ugu jirey sidii xal loogaga gaari lahaa xiisada ka soo cusboonaatay caasimada ayaa sheegay in go’aankii baarlamaanka ee 12-kii bishab ay ahayd April ay sababtay in dad badan u dhinteen,kuwo u dhaawacmaan halka kumanaan qoysna ka barakaceen guryahooda. Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa soo xoogeysanayay shakiga ah in Baarlamaanka uu doonayo in kalsoonida kala laabto Ra’iisul Wasaare Rooble.